Ny vohitra olympika ririnina any Beijing dia iray amin'ireo toerana hanaovana ny lalao olympikan'ny ririnina 2022 taona, miaraka amin'ny velarana fananganana manodidina ny 333000 metatra toradroa. Ity tetik'asa ity dia tetik'asa lehibe iray any Sina. Hanbo ™ dia nomem-boninahitra ho lasa mpamatsy sy singa fananganana shingles.
Araka ny fepetra takiana amin'ny fenitra nasionaly kintana telo an'ny tranobe maitso avo indrindra, ny famolavolana ny tanànan'ny Olaimpika Ririnina China Yanqing dia tanterahina mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly, amin'ny alàlan'ny zon-kazo sedera mahasaraka ny tontolo iainana. Amin'io lafiny io, ny tranobe shingles shingles ao amin'ny tanànan'i China Yanqing Winter Olympika dia nanjary zava-nisongadinana tamin'ny sehatry ny Olaimpika Ririnina.
Ho valin'ny ideolojia mitarika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ambany karbaona, ny lalao Olaimpika Yanqing Winter dia naka ny trano ambany, endrika "vohitra tendrombohitra" avo lenta amin'ny fananganana tile vita amin'ny taila. Ny tranobe vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo malalaka dia natsangana araky ny tendrombohitra, ary mampiasa ilay trano vita amin'ny taila vita amin'ny hazo mba hampisehoana ny toetra ara-kolontsaina an'i Beijing siheyuan, izay sady tsy manapotika ny karazan-tendrombohitra no tsy mahasarika ny fahitana eny an-tendrombohitra. Ireo tranobe vita amin'ny hazo manetriketrika sy miorina dia miparitaka eny an-tendrombohitra sy ala amin'ny endrika vondrona. Ireo tranobe vita amin'ny hazo goavambe misy velarana fananganana 118000 metatra toradroa dia miparitaka amin'ny toerana samihafa ary ampifandraisin'ny fantsona anatiny fito. Ny vondrona fananganana zaridaina amboara sedera noforonin'ireo trano vita amin'ny taila hazo maromaro dia manasongadina ny fahitana voajanahary ao amin'ny tanànan'i Yanqing Winter Olympika. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny toetra mampiavaka ny natiora vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo dia manaparitaka ny endrik'ilay tanàna ny tampon-kavoana hazo shingles amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay rafitra fananganana taila vita amin'ny hazo, izay mifanandrify indrindra amin'ny xiaohaituoshan.
Ny olombelona sy ny natiora dia miara-miaina. Ny zavatra jerentsika amin'ny Lalao Ririnina Olaimpika ao Beijing dia tsy ny fifaninanana mahafinaritra sy masiaka ihany, fa koa ny eritreritra ny "hanaraka natiora" hatramin'ny andro taloha tany Shina, sy ny hevitra manan-danja ny "fanajana ny natiora" naroso ankehitriny. Ny trano hazo naorina eo am-pototry dia ny kolontsaina sinoa nentim-paharazana «Ny tafo vita amin'ny hazo lehibe indrindra ao Shina dia manohana ny sivilizasiôna ao amin'ny olombelona sy ny natiora. Amin'ny hetsika voajanahary sy ara-kolontsaina, eo anelanelan'ny ala tendrombohitra sy ny trano hazo, ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina dia mamela ireo mpandray anjara, olona ampitan-dranomasina ary mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny toerana Olaimpika Ririnina hahatsapa ny traikefa nahafinaritra an'ny olombelona sy ny natiora.
Hanbo ™ dia natsangana nandritra ny 17 taona, nandray anjara tamin'ny fananganana tetik'asa an-jatony, ekipa teknika matihanina, Afaka mamaha haingana ireo olana isan-karazany amin'ilay tetikasa. Taorian'ny ekipa mpivarotra 24-ora an-tserasera. Ho an'ny convoy serivisy ho an'ny fividianana.